ယနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့ ကလေးသူငယ်တော်တော်များများသာမက အသက်အရွယ်ရောက်နေတဲ့ လူကြီးတွေကပါ ဂိမ်းတွေကို အရမ်းဆော့လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကြောင့်ဘဲ ဝင်ငွေအများကြီးရကာ အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရှိကြသလို ဒီဂိမ်းကြောင့်ဘဲ ဘဝပျက်ပြီး ရောဂါတွေရကာ ဒုက္ခပေါင်းစုံကို ခံစားကြခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ interner café တခုမှာ ဂိမ်းဆော့နေရင်း အသက်ပြောက်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ၎င်းအမျိုးသားကတော့ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ …
ရင်​ခုန်​စွဲမက်ဖွယ်​ကောင်းတဲ့ ခန္တာကိုယ်​​ကောက်​​ကြောင်းအလှကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ ချစ်ရတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း မိသားစုရှေ့က ရပ်တည်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာလေးက ရုတ်တရက်ကြီး ချစ်သူကောင်လေးကို ချပြလိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်​​တွေအားလုံးလည်း Surprise ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ သင်ဇာ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဖြစ်တာမို့ ပရိသတ်တွေက ပိုပြီး အံ့အားသင့်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာလေးက လုံချည်လေးဝတ်ပြီး …
ကောလင်းမြို့နယ်၊မြင့်ဒူးရွာတွင် ယနေ့နေ့လည် ( ၂ )နာရီအချိန်ကလင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှဇနီးနှင့်သမီးအားဓားဖြင့်ခုတ်သတ်မှုဖြစ်ပွားသည်။ မြင့်ဒူးရွာနေ မင်းမင်းအောင်နှင့်ခင်ထက်ထက်လိူင်တို့သည်လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှယောက်ျားဖြစ်သူမင်းမင်းအောင်မှဌင်း၏ဇနီးခင်ထက်ထက်လိူင်နှင့် ( ၇ )လအရွယ်သမီးဖြစ်သူဇင်ရတီမိုးမြင့်တို့အား ဓားဖြင့်ခုတ်ရာလည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ရင်ညွန့်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများဖြင့်နေရာတွင်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသည်ဟုသိရသည် တရားခံအားအချိန်တိုအတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီး ကောလင်းမြို့မစခန်းမှဥပဒေအရအရေးယူထားကြောင်းသိရသည်။ Kawlin Newslay …………………………. unicode ကောလငျးမွို့နယျ၊မွငျ့ဒူးရှာတှငျ ယနနေ့လေ့ညျ ( ၂ )နာရီအခြိနျကလငျမယားခငျြးရနျဖွဈရာမှဇနီးနှငျ့သမီးအားဓားဖွငျ့ခုတျသတျမှုဖွဈပှားသညျ။ မွငျ့ဒူးရှာနေ မငျးမငျးအောငျနှငျ့ခငျထကျထကျလိူငျတို့သညျလငျမယားခငျြးရနျဖွဈရာမှယောကျြားဖွဈသူမငျးမငျးအောငျမှဌငျး၏ဇနီးခငျထကျထကျလိူငျနှငျ့ ( ၇ )လအရှယျသမီးဖွဈသူဇငျရတီမိုးမွငျ့တို့အား ဓားဖွငျ့ခုတျရာလညျပငျးပွတျရှဒဏျရာ၊ရငျညှနျ့ထိုးသှငျးဒဏျရာမြားဖွငျ့နရောတှငျပှဲခငျြးပွီး …
ဆီဆိုင် မြို့မှ ထူးခြားတဲ့ ညီအကိုလေးယောက်တပြိုင်ထဲဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာဆာင်ပွဲ။ ဆီဆိုင် မြို့က သူများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားတဲ့ စရိတ်ချွေတာ ပေါ်ပျူလာဖြစ်စေခဲ့လို့ အမှတ်တရ တင်ပေးခဲ့ခြင်းပါ။ ချစ်ဘော်ဒါတို့လဲ အစီအစဉ်လေးဆွဲလိုက်ကြဦးနှော် ညီအစ်ကိုလေးယောက်လုံး တစ်ချိန်တည်းမှာ မိန်းမယူနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ စကေးက လေးစားလောက်ပါပေတယ် 3-5-2019 crd ကိုစည်သာဟိန်း ……………………. unicode ဆီဆိုငျ မွို့မှ ထူးခွားတဲ့ …
ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီးသောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….. (၁) မူးမော်ခြင်းကင်းဝေးစေမယ် ” သတ္တုဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် မူးမော်ခြင်းတွေ၊ ခေါင်းနောက်တာတွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဂျင်းကို ဆေးအဖြစ်နဲ့ သုံးစွဲလာတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှတ်တမ်းတွေအရ ခေါင်းမူးတာတွေ၊ အန်ချင်တာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတာပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ …
သင့်ကို လိုသုံးလို့သဘောထားပြီး ကစားနေတဲ့ ရည်းစားကို ပညာပြနည်း (၅) မျိုး
လူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တဲ့သူ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ နာကျင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့တော့ ကြုံရမှာပါ။ ကိုယ်က သူ့အပေါ်ကောင်းသလောက် ကိုယ့်အပေါ်ကိုတော့ နည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်ပဲ လိုသုံးလို သဘောထားကာ မလိုချင်တော့မှ စွန့်ပစ်သွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို လက်စားချေချင်ရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲနော်……. (၁) ငုံ့ခံမနေပါနဲ့ သင့်ကို စိတ်တိုအောင် လုပ်တယ်၊ စိတ်ထဲမှာ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုရင် ငြိမ်ခံမနေပါနဲ့ ပြောပစ်ပါ။ …
တဏှာလား..အချစ်လား.. သူငါ့ကို ဘာလို့ချစ်တာလဲလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ စဉ်းစားဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ဘာကြောင့်ချစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိကြပါလိမ့်မယ် ။ ရုပ်ချောလို့ ချစ်တာလား ၊ ချစ်စရာကောင်းလို့ ချစ်တာလား ၊ ပိုက်ဆံရှိလို့ချစ်တာလား ၊ ဂုဏ်ရှိလို့ချစ်တာလား ၊ ကိုယ်လုံးလှလို့ ၊မိုက်လို့ချစ်တာလား ၊ စကားပြောကောင်းလုိ့ချစ်တာလား ၊ အနေအေးလို့ချစ်တာလား ၊ …
ရာနှုန်းပြည့် ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် စိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူး ချစ်ကြသူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး ၅မျိုး
၁။ ရည်မှန်းချက်တွေ နောက်နှေးခြင်း” လူတစ်ယောက်ကို ရာနှုန်းပြည့် သူ့အပေါ်မှာ စိတ်နှစ်ပြီး ချစ်ရတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာ နောက်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းလိုလို သူ့အပေါ် စိတ်က ရောက်နေတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်တတ်ပြီး ထင်ထားသလောက်လည်း အောင်မြင်မှု မရရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းအတွက် ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တောင် သူက ကိုယ့်သွားမဲ့ ပန်းတိုင်းမှာ အတားအဆီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စကို …
ဘီယာဟာ ဆံပင်ကိုအရှည်မြန်စေပါတယ်တဲ့ …(မိန်းခလေးများအတွက်) …
ဘီယာဟာ ဆံပင်ကိုအရှည်မြန်စေပါတယ်တဲ့ … သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အထွေထွေအသုံးဝင်ပုံများ … (၁)ဆံပင်ကိုအရှည်မြန်စေတယ် … ဘီယာမှာ ဗီတာမင် ဘီနဲ့ ဆီလီကွန်ပါဝင်တာကြောင့် ဆံသားကိုအားပြည့်စေပြီး ဆံသားလှပကျန်းမာစေပါတယ်။ ဆံပင်ပေါ်သို့ ဘီယာတစ်ခွက်ကိုလောင်းပြီး ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။၅မိနစ်ခန့်ကြာမှခေါ်င်းပြန်လျှော်ပေးပါ။ဆံသားများတောက်ပတာကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်နော် ….. ။ (၂)အသားအရေတင်းရင်းစေတယ် … ဘီယာမှာ အသားအရေနုပျိူစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ရှိတာမို့အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ထို့ပြင် အရေပြားဆဲလ်တွေကိုအားကောင်းစေပြီး အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှလဲ …
မြမြ ဝိညာဉ်ထပ်ပူးရင် ဘယ်သူ့ကိုတရားစွဲမှာလဲလို့ ဇာခြည်လွင် မေးပြီ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှပြုလုပ် သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အသတ်ခံရသူမြမြ၏ဝိညာဉ် ထပ်မံဝင်ရောက် အပူးကပ်ခံရသည်ဟုဆိုပါက တရားစွဲဆို သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် ပူးကပ်ခံရသူကိုတရားစွဲမှာလား၊ ဝိညာဉ်ကို တရားစွဲမှာလားဟု ပထမဆုံးအကြိမ် မြမြဝင်ရောက်ပူးကပ်ခံရသူ မဇာခြည်လွင်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို မြမြဆိုသူ၏ ဝိညာဉ်ကဝင်ပူးကာ သူမအဓမ္မပြုကျင့်ခံရကြောင်း ပြောကြားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့နေကာ မြမြ(ခ)သီတာအေးသည် ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံတွင် …